Dawlada Kenya Oo Codsatay Inuu Sirdoonka Itoobiya Uu Kacaawiyo Dhanka Khibradaha. - Cakaara News
Dawlada Kenya Oo Codsatay Inuu Sirdoonka Itoobiya Uu Kacaawiyo Dhanka Khibradaha.
Jigjiga(CN) Khamiis.Jan.15.2015, Sida lawada ogsoonyahay marka ay maskaxda kusoo dhacdo qaarada afrika waxaa carabka kusoo dhaca 4 dal oo kala ah Itoobiya, Masar, Koonfur Afrika iyo Nigeria marka laga eego dhanka baaxada shacabka(poulation), horumarka, warbaahinta , awooda dawladnimo iyo arimo kale.
Itoobiya waxaa u dheer inay tahay hooyada Afrika iyo caaamka ee taariikh ahaan dhinaco badan oo binu-aadamka ah maadama ay tahay wadan meel sare kaga jira taariikhda caalamka.
Waxay Itoobiya 23 sano ee u danbaysay ku dhaqaaqday isbadal xawli ah oo dhanka horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban ah, waxayna hada qarka u saarantahay n ay noqoto wadamada uu dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay.
Waxaa Itoobiya intaas u sii dheer in ay tahay wadanka ugu horeeya Afrika dhanka nabadgalyada islamarkaana kaalin hore kaga jira caalamka tusaale ahaan doorka ciidamada nabad sugida ee qaramada midoobay (UN Peacekeepers). Sidoo kale ciidanka qaranka Itoobiya ayaa ah ciidan qiimo badan oo aad ugu wanaagsan dhanka nabadsugida taasoo ay UN ku amaantay anshax wanaaga. Waxaa kale oo ay qaramada midoobay ciidanka Itoobiya ku amaantay kala soocida cadawga la bartilmaameedsanayo iyo shacabka uu gabaadka kadhigto.
Sir-doonka iyo booliska federaal Itoobiya oo iyagu leh tayo dhanka aqoonta, daacadnimada, iyo taktikada ama xirfadaha. Sirdoonka Itoobiya ayaa ah midka ugu horeeya Afrika tusaale waxaa in badan la isku dayay in khal-khal ama qaraxyo laga gaysto magaalada Addis Ababa oo ah xarunta Fadhiga midowga Afrika iyo dibloomaasi badan oo heer caalam ah kuwaas oo dhamaantood lafashiliyay.
Marka laga eego ama la isbar-bar dhigowadamada afrika mushaarka sirdoonka, booliska iyo ciidanka qaranka Itoobiya waxaa tusaale loo soo qaadan karaa halka nin ee sirdoonka Kenya waxaa uu qaataa mushaar gaadhaya inkabadan 10 sirdoon oo Itoobiya ah. Ciidanka Qaranka, Federeaal booliska iyo waliba baarlamanka Itoobiya sidoo kale waxay u dhigmaan 20-kii qofba mushaarka hal qof oo kamida haayadaha aan kor kusoo sheegnay ee Keenya.
Xikmada meesha kujirta ayaa ah in sirdoonka, federaal booliska iyo ciidanka Itoobiya ay heerkan ku gaadheen wadaniyada kago'naanshaha leh iyo daacadnimo balse aysan lacag ahayn oo waliba aad uga yar marka labar-bar dhigo wadamo badan. Majirto in ay suuro-gal noqoto sirdoonka Itoobiya haba yaraatee in uu musuq ahaan fudaydiyo xaalad nabadgaliyo mid qaran iyo mid caalami toona iyadoo wadamada qaarkood laga helo musuqa noocaas oo kale ah.
Shacaka Keenya ayaa markasata yidhaahda sirdoonka Kenya haka soo tusaale qaato sirdoonka iyo xirfadaha nabad sugida Itoobiya. Hadaba waxay dawlada Kenya kacodsatay sirdoonka Itoobiya in ay kacaawiyaan xirfadaha iyo xaaladaha nabad sugida ee ay Itoobiya kudayashada kumudantahay.